Sucuudi Carabiya: Weerar lagu qaaday Qasriga Boqortooyada Jeddah – Kasmo Newspaper
Sucuudi Carabiya: Weerar lagu qaaday Qasriga Boqortooyada Jeddah
Updated - October 8, 2017 6:42 am GMT
London (Kasmo), Nin hubaysan ayaa galabnimadii Sabtidii shalay weerar ku dilay 2 ka mid ah ilaalada Qasriga Boqortooyada, 3 kalena ku dhaawacay Jeddah, magaalada 2aad ee ugu weyn dalka Sucuudi Carabiya.
Ninka weerarka fuliyay ayaa la sheegay in uu rasaas ka soo riday gaari uu watay oo la siman albaabka galbeed ee Qasriga, isla markiina la dilay, waxaa haybtiisa lagu sheegay Mansuur bin-Xasan bin-Cali al-Fahid al-Amiri oo 28 jir ahaa una dhashay dalka Sucuudiga.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Mansuur al-Turki oo idaacadda Al-Arabiya la hadlay ayaa caddeeyay in aan la ogayn ujeeddadii ninkaas oo maydkiisa lala helay qori Ak ah iyo 3 bambo oo nooca Molotov ee macmalka ah.
Al-Amiri waxaa la sheegay in uu ahaa nin aan dambi hore lagu aqoon, isla markaasna aan la lahayn xiriir ururrada argagixisada, baaritaankiisana uu socdo.
Boqor Salmaan ayaa xilligaan dibadda uga maqan dalka isaga oo booqasho ku jooga Russiya, laakiin lama oga in wiilkiisa dhaxal-sugaha ah, Maxamed bin-Salman, uu ku sugnaa Jeddah iyo in kale.